Hopitalibe Toamasina : Hahazo 9 400 000 Ar avy amin’ny fikambanana Tafaray
10/10/2018 admintriatra 0
Nikatona tanteraka iny ny andiany voalohany tamin’ny “Festival Tamaga Midôla”. Hetsika ara-panatanjahantena fanao amina tora-pasika nokarakarain’ny fikambanana Tafaray tany Toamasina, ny 30 septambra hatramin’ny 7 oktobra teo. Raha ny nambaran’ny mpikarakara teo anivon’ny fikambanana Tafaray, …Tohiny
Mpomba ireo kandidà : Mifandramatra andalam-be
Roa andro monja niatombohan’ny fampielezan-kevitra, lasa hita maso ny fifampihantsiana ataon’ireo mpomba ny kandidà ao amin’ny tambajotra sosialy. Iray volana maninjitra mantsy izay, dia nifandramatra ary tsy mipetraka intsony ny fifanajana amin’ny fifampiresahana anatin’ny tambajotra …Tohiny
Lozam-piarakodia tao anaty ora-nikija. Nihosin-drà ny rano nianjeran’ireto mpitondra môtô nifanehitra tamin’ny taksibe teo anoloan’ny Microcred Andohatapenaka hihazo eny Itaosy. Io no vokatry ny fifandonana teny an-toerana, ny alin’ny alatsinainy lasa teo, tokony ho tamin’ny …Tohiny
Kandidà 21 : Hizotra amin’ny lalan-kafa
Taorian’ ny amboletra tamin’ ny fanatanterahana ny fifidianana ny 7 novambra 2018 izao, dia mitsiry ny hevitra, ary tonga hatramin’ny fifanantonan’ ireo samy mpanao politika. Tahaka izany ny nataon’ny fivondronan’ireo kandidà 21, izay mbola mitady …Tohiny
Nambaran’ny filohan’ny HCC na ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana fa misy ireo olona izay voalazan’ny lalàna fa tokony hanatanteraka ny fanambaram-pananana, saingy minia tsy mahafantatra izany izy ireo, tamin’ ny teny somary mahery moa ...Tohiny